မောင်တော-ကညင်ချောင်း စီးပွားရေးဇုန်အတွက် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်သောင်းကျော် ထပ်မံဖြည့်စွ? - Yangon Media Group
မောင်တော-ကညင်ချောင်း စီးပွားရေးဇုန်အတွက် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်သောင်းကျော် ထပ်မံဖြည့်စွ?
မောင်တော-ကညင်ချောင်း စီးပွားရေးဇုန်အတွက် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်သောင်း ကျော် ထပ်မံဖြည့်စွက်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပြီး ပို့ကုန်ကဏ္ဍကို အထူးဦးစားပေး ကုန်သွယ်မှုပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှလည်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့မှ သုံးမိုင်ခန့်ကွာဝေးသော ကညင်ချောင်းစီးပွားရေးဇုန်ကို ယခုအခါ ပြည်နယ်အစိုးရမှ ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၅ဝဝဝ နှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များမှ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၇ဝဝဝ၊ စုစုပေါင်း ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၂ဝဝဝ ဖြင့် လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်မှုကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နတ်မြစ်လင်းကုမ္ပဏီတို့မှ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မောင်တော ကညင်ချောင်းစီးပွား ရေးဇုန်ကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့နှင့် မောင်တောဒေသ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာတွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမပိုင်းအနေဖြင့် စုစုပေါင်း ၄၉ ဒသမ ၆ ဧကပေါ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကညင်ချောင်းကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ ကညင်ချောင်းစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဧက ၁ဝဝ ကို ထပ်မံတိုးချဲ့ပြင်ဆင်လျက်ရှိပြီး သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်း စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါစီးပွားရေးဇုန်သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် ရေလမ်းခရီးမှ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ် ကူးလူးသွားလာလျှင် ၁၅ မိနစ်ဝန်းကျင်သာ သွားလာရပြီး အထူးသဖြင့် သွင်းကုန်ထက် ပို့ကုန်ကဏ္ဍကို အထူးဦးစားပေးကုန်သွယ်မှုပြုမည့် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်များအနက် မောင်တောနယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးသည် ပို့ကုန်ကဏ္ဍအနေဖြင့် ရာခိုင်နှုန်း ၉ဝ အထိ ကုန်သွယ်မှုပြုလျက်ရှိပြီး သွင်းကုန်အနေဖြင့် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကုန်သွယ်မှုပြုသော နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်ဖြစ်ကာ ကုန်သွယ်မှုပြုရာတွင်လည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်မျိုးတည်းကိုသာ အသုံးပြုလျက်ရှိ ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ကညင်ချောင်းစီးပွားရေးဇုန်၌ သား၊ ငါး၊ ပုစွန် သိုလှောင်ထားနိုင်မည့် အအေးခန်းများ၊ အထည်ချုပ်စက်ရုံများ၊ ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သောရုံးခန်းများအပြင် စားသောက်၊ တည်းခို နေထိုင်နိုင်သောအဆောက်အအုံများလည်း ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပြီး အပိုင်း(၁)ဇုန် A ကို ပထမအဆင့် အကာင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် မြေဧက ၄၉ ဒသမ ၅၈ ဧက၊ အပိုင်း (၂) ဇုန် B, C, D တို့ကို ဧက ၁ဝ၃ ဒသမ ၃၆ ဧကကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အခွန်အကောက်များ အပြည့်အဝ ကောက်ခံရရှိစေရေးနှင့် အသုံးစရိတ်များကို ကြပ်မတ်ရန် မကွေးတိုင်းဝ?